Heerarka Heerka leh ee AutoCAD - Iyadoo ku saleysan xogta laga helo Saldhigga Dhammaan Saldhigga - Gofumed
Nofeembar, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Featured, GPS / Qalabka, topografia
Sidee loo abuuraa khadadka mawjadaha mar horeba waan qabanay barnaamijyada kale. Xaaladdan, waxaan doonayaa in aan sameeyo iyada oo barnaamijka ah ee tababarka mid i tusay mid ka mid ah farsameyaalkayga ugu fiican; kuwaas oo uu ogaa laakiin taas oo xiiso yar ay isaga dhigtay waqtiyadii dhowaa. Waxaan soo koobayaa qaybta bilowga ah sababtoo ah waqti ka hor ayaan sharaxay sida ay tahay xogta laga helo saldhigga guud, waxaana loo gudbiyaa qaab dxf ah. Xaaladdan oo kale, waxaan doonayaa in aan ka dhigi kala duwanaansho ah, marayo liiska dhibcood format txt oo u soo degida ka CivilCAD, sidaa darteed waxaan ku sharxi doonaa hab fudud oo si layliga si buuxda u shaqeeya kuwa doonaya in ay soo bixi xogta laga saldhigga in model ah digital, ka dib markii la weydiiyo su'aal ka mid ah akhristaha Colombia kaas oo aan ka tagi doono sugitaanka post soo socda ee dhalashada profile.
1 U diyaari qaabka .sdr liiska dhibcaha .txt
Waxaan isticmaali doonaa waxa aan ku muujineyno Koorsada sahanka dhawaan, si aan madax iyo aqoon ku jiray oo kaliya socod ama haddii entelarañe ka xun kuwa ka qayb galay iyada oo dan weyn iyo xirfad ha illoobin door bidaan in ay la wadaagaan kuwa kale.
Qodobkani waxaan sharxi doonaa, oo hadda ma soo celin doono, sida loo xaddidayo dirista macluumaadka saldhigga guud. kiiskan, waxaan kaliya diirada saarayaa waxa laga sameeyo Prolink.
Waxaanu furay mashruuc cusub, adoo isticmaalaya Faylka> Mashruuca Cusub . Ka dibna waan dooranaynaa Faylka> Soo dejinta si aad u keento feylka.
Marka geedi socodkan la dhammeeyo, waxaan u dhoofin doonaa qaabka qaabka.
Laga soo bilaabo isla menu, waxaan dooran File> Export, daaqadana waxaan dooran karnaa doorashada Iskuduwaha Yar, qaabeynta qaabka PENZ waxay hoos u dhigtay isku-duwidda (* .txt). Sidaa daraadeed, waxa aan dhoofineyno waxay noqon doontaa xogta oo ay kala soocaan astaamaha kala duwan ee loo yaqaan 'Point Point', Iskudhafid X (Easting), Iskuxirka Y (Northing) iyo sarrifka (Iskuxidhka Z).
Faylka waxaa lagu keydiyaa cinwaanka mashruuceena danaha.
2 Ku saabsan mowqifka QM
Wixii barnaamij badan oo badan lama ogaan karo, laakiin waxay ku dhowdahay in muddo ah; version hore u ordaya on 6.5 14 AutoCAD (in 1994 !!!) Wax badan oo la sabayn daaqadaha marka SoftDesk 8 u banneeyeen aad u dareen ah amarrada qoraalka, iyo ku xusan SoftDesk maxaa yeelay waxay ahayd horreeyay ee labada codsiyada hadda wuxuu leeyahay AutoDesk (Land and Civil 3D).
Faa'iidada ah in macaamiishu ay leedahay, waa qiimaha saafiga ah ee loo heli karo waxa ay ka qaadato diinta Hispanic, sida Goobta Eagle ujeedada Anglo-Saxon; haddii aan ku darno in lagu fulin karo Bricscad, waxaan ku soo gabagabeyneynaa in arrinta dhaqaalaha ay tahay mid ka mid ah kartida ugu wanaagsan. Ma dhicin isla markii ay ku sameyneyso AutoCAD maxaa yeelay waxay ku jirtaa qayb buuxda, tan iyo AutoCAD LT ma taageerto horumarinta runtime, in haa, waxay taageertaa AutoCAD 2012 dhowr qaab oo dib u noqosho ah.
CivilCAD waa codsi ay soo saareen shirkadda Mexico ArqCOM, Samaynta la taaban karo Engineering iyo jadwal dhiismeedka Dufcaddii parceling, lagu daydo digital, profiles, design joomateri ee waddooyin iyo shabakado hidorosanitarias. Ma waxa ay ka qaban lahayd in la sameeyo Civil3D laakiin wax ku ool ah (ma sameeyaan wax kasta oo, laakiin waxa aanu u baahan nahay), xitaa ma qaar ka mid ah wax dheeraad ah in mid ka mid ma ugu fudud ee qarniga daaqaddii UTM iyo wadataa juqraafi labadaba, daabacaadda kartaan qaabka Wizzard ku salaysan, auto tirintii riteen iyo noocyo kala duwan oo warar aan ka helnay macnaha Isbanishka ku hadla.
Marka lagu rakibay CivilCAD, waxaan ka abuuray on desktop ama barnaamijka toobiye menu in furay AutoCAD la menu oo dheeraad ah u yeedhay CivilCAD, halkaas oo aad ka heli kartaa dhammaan functionalities horumariyo ah; inkastoo mid waliba uu leeyahay amar qoraal ah oo loogu talagalay kuwa jecel inay tagaan Beljamka loogu talagalay Belgian. Sawirada soo socdaa waxay muujinaysaa sida loo eego habka Maareynta Maareynta Maareynta Macaamiisha (CivilCAD), inkasta oo shaashadda ugu weyn ay la mid tahay line line.
3 Soo dejinta macluumaadka xogta ee ka timid CivilCAD
Si aad u abuurto wareegyada, marka hore, samee foorm cusub oo keyd; in la sameeyo Fayl> Kaydso.
Si aan u soo dhigno qodobbada aan soo saarnay tallaabada hore, waan ku sameynaa CivilCAD> Qodobada> Dhulka> Soo-dejinta.
Eeg wax yar oo ah dhibcaha imtixaannada kala duwan ee lagu kala iibsado ee CivilCAD. Dhowr ka mid ah kuwan waa jaangooyooyin astaan ​​u ah Hispanics ay sameeyaan qalabka caadiga ah, ka duwan barnaamijyada loogu talagalay Americans oo kaliya ayaa oran kara COGO iyo ururiyaha.
Waxaan dooranay ikhtiyaar n XYZ, waxaanan ku calaamadeyneynaa inaad soo gashid sida faahfaahinta lambarka dhibcaha iyo sharaxaadda.
Eye, ka hor inta aan la samayn tan waxay ku haboon tahay in la xaqiijiyo faylka txt, si loo hubiyo in uu leeyahay qaabkan. Taasi waa, hadda waxaan ku qasban nahay in aan sameyno Meel Dhumar ah, si aan u aragno meesha ay dhibcaha ama goobaha qoraalka ka dhaceen.
Tani waxaa la sameeyaa CivilCAD> Altimetry> Saddex xagal (Triangulation)> Terrain. Waa inaad aragto kala doorashooyinka hoosta ka muuqda, oo ku yaal khadadka taliska ee qaabka "AutoCAD style":
Dhibcaha / Curoodhyada <P>:
Taas macneheedu waa, in aan ka sameyn karno goobo ama goobo jira. Haddii C waa la doorto inta u dhaxeysa barmaamijyada, waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo P, ka dibna geli; haddii P horeba la doorto sida ku cad tusaalahayga, kadibna gali kaliya.
Ka dibna na weydii wixii dhibcood ah, annaga oo dhan ayaan dooran oo waan soo galeynaa.
Ka dibna na weydii masaafada ugu sarreysa ee u dhaxaysa dhibcaha; taasi waa, sidaa daraadeed taasi ma keento xagal ujeedka u dhexeeya dhibcaha dhinaca dariiqyada raadiyaha.
Masaafada ugu badan <1000.000>:
1000 waxay timaadaa mid iska caadi ah, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa xaaladda sahankeenna; waan aqbali karnaa adoo samaynaya ama meel kale gelin. Haddii ay tahay baaritaan wadada, waa in aysan ka badnayn laba jeer fogaanshaha qiyaasta aan u isticmaalno si aan u aragno aragti.
Qaabka ugu Hooseeya <1>:
Tani waa doorasho kale, taas oo ah wax ku ool ah si loo fududeeyo xagleynta. Guud ahaan ma naan qaadno xisaabtan, laakiin waa in aynnu daraaseynaa, haddii ay tahay baadhitaano loogu talagalay waraabinta waraabka, halkaas oo dhibcaha cufan ee la qaado.
4 Abuuri goobo
Tani, waxaan dooran CivilCAD> Altimetry> Curiska heerarka> Aagga. Guddiga soo muuqda waxaan ku dhisnaa dhowr mitir oo kasta waxaan rabnaa heerarka ugu muhiimsan iyo heerka labaad; arki warcelin oo xiiso leh waa in ay ku dhacday guys ArqCOM, marka dadku soo jeediyay in ay gooladaha qaro weyn khafiif ah iyo qallooca wac heer.
Halkan sidoo kale magaca lakabka, midabka iyo waxyaallaha sarraysa ee xuubka ayaa lagu qeexay. Xusuustaa dusha ma aha line a smart, laakiin spline la qanjidhada iyo Fatuuq of dhaf, sidaas darteed waxaan isaga u qeexi karaan oo xuduudaheedu sida kuwa hoos ku qoran: Number of-hoosaadyada ama dhererka ugu yaraan ee xariiqa qallooca ayaa, la taaban karo, waayo, nidaamka abuuraa khadadka dusha muuqda geesoolayaashu ama Curazeña timaha gabar - iyo ma ahan oo keliya madaxa ???? -
Marka aad dooratid Ok, ikhtiyaarka aad ku dooranayso qaabka xaglaha saddex xagalka ah ayaa ka muuqda khadka taliska.
Si aad u calaamadiso iyaga waan dooranaynaa: CivilCAD> Altimetry> Curiska Heerka> Annotate. Waxaan ku habeyneynaa ama aqbaleynaa kharashka ku xiga ee ku xiga, marka la eego qiyaasta aan u adeegsaneyno daabacaadda, dhererka qoraalka, cutubyada, jajabyada iyo haddii aan rabno calaamadda ee wareegyada ugu muhiimsan.
1 Daabacaadda Sawirka ee <1000.00>:
Heerka qoraalka ee mm <2.5mm>:
Tirada Decimals <0>:
Kala soocaan curiska dhuuban? S / N:
Kadibna waxaan ku dhajineynaa labada qodob ee ugu dambeeya ee gooyay goobaha aan xiiseyneyno calaamadaynta.
Waxaa cad 3D Civil ayaa waxaad fartaan Wannaagga heerka cajiib ah in arrintan loo sameeyo, gaar ahaan, maxaa yeelay, xawilaadda lacagaha ee qanjidhada XML gundhig in ay leeg- bidix, halkaas oo model walxaha kala duwan yeelan karaan arrimo, sidoo kale sababta oo ah model jirto gudahood weel iyo dhibcahaaga iyo curiska heerka ama khariidadda muraayadda ayaa kaliya ah muuqaal muuqaal ah oo la keydiyay.
Si ka duwan CivilCAD, taas oo dhalinaysa walxo badan oo ka mid ah firfircoonidaas. Laakiin kuwa Cilmiga leh Softdesk loo isticmaalo si aad u hesho in ay talaabadan uu degan qaar ka mid ah dareen, iimaanka in aan la arki karin iyo qanjaruufo nasiib. Waxaa jira faa'iido weyn oo la isticmaalayo CivilCAD, tallabooyinka waa kuwo yar, inkasta oo aan kordhin aan tiraab u badiso xagga dhadhanka saafi ah oo halista ah ee samaynta timaha cusub cirro turjumaan macaan oo ka soo Peru jiiday qaadataa this galay egeomate.com.
Post Previous«Previous I-model, ku noqo tayo
Post Next Xaaladda Nederlandiga ah, oo ka tarjumaysa Latin American ahNext »
11 Jawaab ah "Curcaha Heerka leh AutoCAD - Laga soo bilaabo Dhammaan xogta idaacadda"
Kuwani waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay internetka maanta bixiyaan.
Hada, waxaan ahay Rodrigo Hernandez L. oo ka yimid Chile
oo run ahaantii waan qadarinayaa waxa ay qabtaan, waxaan iskuulka ka baranayaa farshaxanka ballaaran ee 20 ka hor.
Way adag tahay in qof daraasaddan maadada ahi baro neophyte si uu dhab ahaantii u barto.
Jose Luis Flores isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ka dhigno dhererka dhulka dabiiciga ah si aan kor ugu kaco sida aan u qaban karo ... Anigu waxaan horey u leeyahay farshaxanka
Francisco Javier Suárez Pérez isagu wuxuu leeyahay:
Well waxaan sahmiyaha sannado badan, qabashada theodolite ku saabsan 22 sano ka hor, laakiin guud ahaan saldhigga leeyihiin waayo-aragnimo aan wax badan la khadadka dusha waa habka kor dusha la total station
Jorge González isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! iyo Hello Alice:
"Waxay i siiyeen qorshe ay ku daabacan yihiin cuvas heerka ka samaysan warqad. Waxaan u baahanahay inaan u gudbiyo" autocad "si aan uga shaqeeyo.
Ma ii sheegi kartaa sida?
1) Qaado sawir diyaaradeed
2) Waxay u bedeshaa sawirka JPG
3) Mashruuca AutoCad Raster Design waxa uu qabtaa
4) Aqoonsiga dhamaadka heerarka hoose ee heerarka hoose (line line) leh heerkiisa sare. Barnaamijku wuxuu ku weydiin doonaa. Sidoo kale, fiiri tirada xirmooyinka heerka dugsiga sare (khadadka khafiifka ah) inta u dhexeysa heerarka hoose ee heerarka hoose sababtoo ah barnaamijku wuxuu ku weydiin doonaa inta sawirka ku yaal.
Keydso feylka kadibna u furfuri AutoCad.
Taas oo dhan waan xasuustaa waxaan sameeyay dhawr sano ka hor
Dabcan, fiiri maqaalkan.
Alicia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan helay diyaarad leh cuvas heerkeedu ku qoran warqad aan u baahnahay inaan u gudbiyo autocad si aan u shaqeeyo.
ELIZABETH ESCOBAR isagu wuxuu leeyahay:
Aad baad ugu mahadsan MUHIIM AH UU MAR WALBA QOF BAR samir FADLAN, tan iyo dad badan waa mid aad u koobaan la wadaagno AQOONTA sida.
raul point isagu wuxuu leeyahay:
galab wacan, waxaan weydiistaa cadeyn madani ah 2008, wuxuu ku khuseeyaa mashruucan xNUMXd 3 ,,,,,,,,,,,,,,
JORGE MARTELL isagu wuxuu leeyahay:
SHAQADA AAN GAAR AH, KU SHAQEYSO WARBIXIN
Waa fiicanahay, waxaan hadda u adeegsanayaa Civilcad si aan ugu shaqeeyo sahankayga, waxaanan kuu xaqiijin karaa in ay tahay qalab aad u muhiim ah oo yaraynaya waqtiga shaqada xafiiska iyo si sahlan loo isticmaalo.